Ukubukwa kanye nesimo sepaki yasePetrin Hill kwenza enye yale 5 indawo enhle yepikiniki eYurophu. Kuyamangaza, etholakala eMancane Town, IPetrin Hill yipaki eluhlaza futhi ebukekayo ebuka iPrague Castle. UPetrin unikeza imibono enhle kakhulu yenhloko-dolobha, futhi ungakhuphukela umbhoshongo obonakalayo we ukubukwa okuhle okumangalisayo lomuzi, izinqaba, namabhuloho.
UPetrin Hill uphelele epikinikini eYurophu entwasahlobo, ukuwa noma ihlobo. Iqabunga lizobukeka ngokuphelele emangele ekwindla entwasahlobo nasehlobo zonke izihlahla nomhlaba ziyoqhakaza futhi zibe nombala oluhlaza. Vele ubambe ezinye izikali nge amajikijolo kusuka Izindatshana Kubhakha futhi nonke nihlelelwe ipikiniki emangalisayo ePrague.
Amanzi ama-pristine aluhlaza okwesibhakabhaka neziqongo zezintaba ezibonisa echibini, ukubukwa kweLake di Braies eSouth Tyrol e-Italy kuzofaka umbala epikinikini yakho ngezinkumbulo ezinhle. I-Italy izulu lezwe, kuhlangene amachibi amangalisayo futhi izintaba, Akubalulekile ngempela ukucacisa izizathu eziningi ezenza leli chibi lethu liphezu kwethu 5 indawo enhle yepikiniki eYurophu.
4. I-picnic Esiqhingini SaseMargret, Budapest
I-Paris inezingadi ezinhle eziningi nendawo enepikiniki eceleni kweSeine. Indawo enhle yepikniki eParis ikhona ngaphesheya kwesikhala sodumo lwamaChamps de Mars.
Kuyindawo enhle eluhlaza phakathi kokuhlelwa kwesikhombisa ne-Eiffel tower. Iphelele ipiyano eParis futhi inikeza izihlalo ezinhle kakhulu zokushona kwelanga. Ngaphezu kokubukeka komhlaba, futhi kungenye ye 10 ukubukwa okuhle kwe-Eiffel Tower eParis.
Njalo ehlobo imindeni yamaParis yaseParis ifika izothatha ilanga noma ijabulele ukubuka kwezingadi. Kuyinto enokuthula okukhulu futhi ihlinzeka ngesilungiselelo esihle sokubuka izibani zasebusuku zase-Eiffel.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwethu kwebhulogi okuthi “I-5 Best picnic Spot eYurophu” kwisayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/ ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)